Tag: pịa a na | Martech Zone
Tag: pịa wepụtara
Wednesday, October 30, 2013 Tuesday, October 29, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mmekọrịta ọhaneze, jide n'aka na ị ga-enyocha ihe niile Ntuziaka nke PR site n'aka Brownstein & Egusa. Maka ụfọdụ nkọwa zuru ezu banyere atụmatụ PR, gbaa mbọ gụọ akwụkwọ ndị ọbịa - Ndụmọdụ PR Site na onye na-ede akwụkwọ VentureBeat na mbụ - site na Conrad Egusa na blọọgụ dị egwu nke Scott Monty. Ekele dịrị Marty Thompson maka nchọta ahụ! Ọ bụrụ na m ga-agbakwunye ihe ọ bụla, ọ ga-abụ nzọụkwụ n'etiti 3
Nke a bụ ihe atụ dị egwu nke Dendrite Park nyere m na enweghị m ike ikwenye na ya. Ha na-ewetara usoro dị iche iche maka usoro ịre ahịa ọdịnaya gị nke chọrọ nnukwu ntọala ma sikwa ebe ahụ na-eto! Nke a bụ osisi amamihe nke ịre ahịa ọdịnaya maka azụmaahịa gị. Mgbọrọgwụ siri ike (akụrụngwa IT, SEO na nchịkọta) dị mkpa iji kwado ogwe (weebụsaịtị gị) iji buru ibu nke ọrụ mgbasa ozi (okpueze) nke na-ewetara gị
Ọ bụ ezie na enwere m ekele maka mkparịta ụka tweet site n'oge ruo n'oge, oge ọ bụla ọ ruru eru ịkekọrịta mkparịta ụka a ma tụlee ya n'ihu. Ihe atụ m na-enye taa bidoro site na nkwupụta mgbasa ozi nke anyị na Dittoe PR rụkọrọ ọrụ iji kwupụta weebụsaịtị ọhụrụ ha. PRDude… onye kwuputara na ọ na-agbachitere ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze bụ onye kpuchiri aha ya (nnukwu atụmatụ ọha na eze), wepụtara akwụkwọ akụkọ maka ọrụ n'ihi